Micro Food Grade Medical mudziyo Pump DS2504 - DESUN
Miniature brushless DC pombi 1, inoti: Brushless DC pombi anoshandisa nheyo wechigarire magineti brushless DC injini, pamwe chete impeller rotor, dzimba mamiriro zvakagadzirirwa kuti mvura kuti Centrifugal kwebasa mhango nziyo, nekuti No bhurasho kukweshera, saka hapana mba; mukuru kunyatsoshanda, pasi simba rakawanda, upenyu bhurasho injini refu, pasi ruzha. Tichienzanisa injini DC brushless pombi, brushless DC pombi ane zvinotevera zvazvakanakira: 1) The pombi rwiriko inova namahwindo Stat ...
Miniature brushless DC pombi
Brushless DC pombi anoshandisa nheyo wechigarire magineti brushless DC injini, pamwe chete impeller rotor, dzimba mamiriro zvakagadzirirwa kuti mvura kuti Centrifugal kwebasa mhango akafanana, nekuti
No mumakwenzi kukweshera, saka hapana sepfarivari; mukuru kunyatsoshanda, pasi simba rakawanda, upenyu bhurasho injini refu, pasi ruzha.
Tichienzanisa injini DC brushless pombi, brushless DC pombi ane zvinotevera zvazvakanakira:
1) The pombi rwiriko inova namahwindo chisimbiso kunofambira mberi kubva chisimbiso guru, tichidzivisa chose nhau leakage; zvingava Dzinogara pose mumvura nepanyika uye zvakazara isapinda
2) No yoga lubrication uye kutonhora mvura, nokuderedza simba rakawanda
3) Low simba rakawanda, mukuru kushanda zvakanaka, damping uye damping, kuderedza simba gwenya vibration pamusoro pombi uye nezvainoita injini kana pombi cavitation vibration
4) zadzisa kuti rotor kuchaita vapedzisire pamusoro zvedongo mugodhi, injini, pombi dziviriro
5) Brushless DC pombi uchishandisa zvigadzirwa zvinoriumba kuti commutation, pasina kushandisa kabhoni bhurasho commutation, kushandisa mukuru-waivako kusakara nemishonga nemazvo zvedongo mugodhi uye graphite ruoko, kuti ruoko kuburikidza jekiseni Kuumbwa uye magineti pamwe chete yose kudzivisa yabvaruka, nokuda
Izvi brushless DC rinobva pombi upenyu kunowedzerwa zvikuru. Magnetic voga pombi chikamu stator uye rotor oga zvachose stator uye dunhu bhodhi chikamu epoxy potting, 100% isapinda rotor
Chikamu wechigarire magineti, kupomba muviri pamwe zvakatipoteredza ushamwari zvinhu, pasi ruzha, duku kukura, yakagadzikana unongotaura. Various parameters zvinogona kugadziridzwa kuburikidza stator windings uye inogona kushanda panguva rakafara voltage.
Advantages: upenyu hurefu, yakaderera ruzha kusvikira 35dB pazasi, inogona kushandiswa mvura inopisa kutenderera. The stator uye dunhu bhodhi zvikamu injini vari encapsulated pamwe epoxy uye zvachose Kuparadzaniswa rotor kuti pemvura chokugadza kudzivirirwa zvizere
Mvura, mvura pombi nomubato dzakakwirira-waivako zvakarurama simbi mugodhi kana zvedongo mugodhi, mukuru nemazvo, zvakanaka kuvhunduka kuramba.
Food mugwaro Micro-pombi 2504HF
1) diki saizi, nyore kugadzwa
2) Import PPE mbishi zvinhu
3) kupedza graphite mabheyaringi, kuwedzera upenyu basa
4) The kunonyanyisa nokushanda tembiricha 100 ℃ (optional)
5) The shoma uchishandisa voltage ndiye 3V, kufadza uchishandisa voltage pamusoro 24V, vaviri AA mabhatiri
6) Inogona customized maererano zvinodiwa zvakasiyana-siyana kudzivirira (ichivharira kudzivirirwa / neizvi polarity kudzivirira / mvura kudzivirira) Epoxy potting, IP68 isapinda Rating
7) kusangana zvokudya-inotakura zvinodiwa
mhando Volts (V) Amps (A) Max kuyerera (LPM) Max Lift musoro (M) Power (W)
3.flow / musoro munyonga
Aquarium, utsanana vazviziva, kicheni uye chimbudzi, mvura mubhedha, rutsoka masaja, soilless kurimwa, tsime, zvokurapa midziyo, duku imba midziyo yemagetsi, etc.
7.matters zvinoda kugadziriswa
1) chigadzirwa ichi ndowenyika Centrifugal pombi, inofanira kuiswa iri mvura pazasi nzvimbo!
2) Usashandisa mvura nezvavatorwa nezvimedu kupfuura 0.35mm uye rinobva inoramba.
3) Vharuvhu pasina mvura, asiri kushandiswa! Kudzivirira rotor kubva kutenderera pa kumhanya kubudisa yakakwirira tembiricha yabvaruka.
4) Kana uchishandisa ari pasi-tembiricha zvakatipoteredza, iva nechokwadi chokuti mvura hazvirevi -oma kana kuva viscous.
5) Zvakakodzera kufanoona yakaderera tembiricha chando nyandu, kudzivirira chando pombi dzakawanda chando dzinokaroparuka.
6) DC brushless pombi chaiyoiyo kudzora munyika Clearance, hapana urove, zvimwe zvichiita yakawedzera ruzha uye vibration!
Previous: Household midziyo yemagetsi vakasiyana pumps DS2503
Next: Micro-zvokudya mugiredhi zvokurapa pombi DS3305
Factory zvakananga Kutengeswa Brushless duku DC mvura pu ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W> 30000hrs 100degC upenyu hurefu Sma ...
24V 5M 9L / Maminitsi High unhu Long Life Food giredhi ...
Factory zvakananga Sale China yepamusoro Food gra ...
6V ~ 24V 3W ~ 6W DC nakisa kunyarara unhu hwakanaka coolin ...
12V / 24V DC pombi rezuva mvura Centrifugal kuti ja ...